Matongerwo eNyika, 06 Chikumi 2019
China 6 Chikumi 2019
Chikumi 06, 2019
Vechidiki Makumi Mana neVaviri Voenda kuAmerica kweMasvondo Matanhatu
Vechidiki makumi mana nevaviri vari kuenda kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship mwedzi uno.
VaMasaraure Vanoti Havasi Kuzorega Kurwira Mihoro Yakakwana yeVarairidzi
Mutungamiriri wesangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, avo vakapambwa nevanhu vatanhatu nezuro pakati pehusiku, vanoti vakarohwa zvakaipisisa, uye vakatorerwa mbatya dzavainge vakapfeka.
Zimbabwe Yokurudzirwa Kuremekedza Kodzero dzeVanhu Kana Ichida Kudyidzana neDzimwe Nyika
Zimbabwe iri kuyedza kusimbaradza hukama hwayo nenyika dzakabudirira kusanganisa America nesangano reEuropean Union.
Matanho eHurumende eKugadzirisa Hupfumi hweNyika Orwadza Vakawanda
Apo hurumende inoti iri kugadzirisa hupfumi hwenyika, vakawanda munyika vanoti vave kutotambura zvakanyanya uye vanoti inguva chete vasati vatora matanho ekugadzirisa zvinhu pachavo.
Mutungamiri weARTUZ, VaMasaraure, Vanopambwa Pakati peUsiku
Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, VaObert Masaraure vanonzi vapambwa pakati peusiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi.
Chikumi 05, 2019
Chirongwa cheTNF Chinoparurwa VaMnangagwa Vachikurudzira Vanhu Kuti Vasaramwe Mabasa
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vaparura neChitatu nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi vachikurudzira kuti vashandi vasaratidzire kusafara kwavo nekuoma kuri kuita zvinhu munyika.
Kuramwa Basa kweARTUZ Kwapera neChitatu
Vachitaura neStudio7 parunhare, mutungamiri weARTUZ, VaObert Masaraure, vati hutungamiri hwesangano ravo huri kusangana neChina kuti huzeye zvakabuda mukuratidzira kwavo.
Zimbabwe Yoita Hurukuro neEuropean Union
Hurumende yeZimbabwe yatanga neChitatu kuita nhaurirano nenyika dziri mumubatanidzwa weEuropean Union, EU, ichiyedza kumbiridza hukama hwayo nenyika idzi sezvo pange paita kurimirana kumuganhu kwemakore akawanda.
Mutungamiri weNyika, VaMnangagwa, Votarisirwa Kuparura Gwaro reMutemo weTNF Act
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act.
Vamwe Vagari vemuWard 17 kuChitungwiza Vonetseka Kuwana maTitle Deeds eDzimba Dzavo
Vamwe vagari vekuChitungwiza vanonzi vari kunetseka kuwana magwaro edzimba dzavo dzavakatenga muna 1979, kana kuti ma title deeds.
Chikumi 04, 2019
South Africa Yoberekera Ingwe kuZvizvarwa zveZimbabwe
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira dzimotokari kuSouth Africa zvave kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kupiswa kwedzimotokari nevanhu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa vasiri kuda kuti zvizvarwa zvekunze zviwane mabasa.
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vazivisa kuti hurumende icharamba ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika zvisinei kuti veruzhinji vari k
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vazivisa kuti hurumende icharamba ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika zvisinei kuti veruzhinji vari kuti hurumende inofanira kusiyana nemari idzi kunyanya mari yekuAmerica sezvo yakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Kuratidzira Korongwa Kuitwa muLondon ne New York
Varwere Voshaya Vanovabatsira Muzvipatara Zvikuru zveHurumende
Mutumbi waVaMugabe Unodzoserwa kuHarare neChikopokopo
Varwere Voyaura Muzvipatara zveHurumende
Madhokotera Anoenderera Mberi Achiramwa Mabasa